Ungalazi njani inani leekhompyuter ozigunyazisileyo kwi-iTunes | Ndisuka mac
Umdlali osilelayo weMacO unezinto ezibonakalayo kunye nokusilela. Mhlawumbi kumsebenzisi oyingcali ayisiyiyo inkqubo eneempawu ezininzi, kodwa kubasebenzisi abaninzi beMac kungaphezulu kokwaneleyo. Olunye lweempawu ezifanelekileyo lelona ukukhuphela umculo okanye iimuvi kwi-Mac yethu, esiyifumene kwezinye iikhompyuter okanye izixhobo ze-iOS. Ukukhuphela lo mxholo kwiiMac kunokwenzeka. I-Apple iyakwenza ukuba ukhuphele izinto kwiikhompyuter ezifikelela kwi-5. Kubalulekile ukwazi inani leekhompyuter eligunyazisiweyo kwi-iTunes, ukongeza enye kuluhlu okanye ukuyikhupha xa ufuna ukuthengisa okanye ukunika iMac komnye umsebenzisi.
Ukufumana inani leekhompyuter ezidibeneyo kulula, kodwa kufihliwe ngandlela ithile. Masibone ukuba iphi:
Sivula iTunes. Okokuqala, kufuneka siqale kwiseshoni kwi-iTunes. Ngale nto kufuneka singene kwimenyu engaphezulu kwelizwi akhawunti kwaye ucofe ku ngena. Unokuba nolwazi, kodwa unokuba negama eligqithisiweyo le-iTunes elahlukileyo kwi-ID ye-Apple, gcina oko engqondweni.
Nje ukuba singene, kufuneka singene kwakhona akhawunti, kwaye ngeli xesha cofa apha bona iakhawunti yam. Ngoku uza kubona lonke ulwazi lweakhawunti njenge: indlela yokuhlawula, idilesi yamatyala, njl.
Kuya kufuneka sikhangele ukhetho iikhomputha ezigunyazisiweyoEkupheleni kwebhloko yokuqala. Kumzekelo, uApple undixelele ukuba ndineekhompyuter ezimbini ezigunyazisiweyo. Kwimeko yokuba nekhompyuter egunyazisiweyo windows, iyakongeza.
Njengoko besikulindele ngaphambili, unokuzicima zonke iikhompyuter ezixhumeneyoNgokucofa ekunene komyalezo. Oku kulungele ukwabela iqela elitsha kunye nokukhulula elidala, okanye xa uyeka ukusebenzisa iqela ukuyithengisa okanye ukuyinika ilungu losapho. Khumbuza ukuba xa uyinika ilungu losapho, banokufikelela kwizinto ozithengileyo ukuba nje ungazongeza Kusapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ungalazi njani inani leekhompyuter ozigunyazisileyo kwi-iTunes
Dlala kwaye ufundise iitafile zokuphindaphinda kubantwana abane: Mathemagics Multiplication